मिडियाले धनीका अपराध दबाउँछन्, गरीबका अपराध उचाल्छन् : कार्ल मार्क्स | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मिडियाले धनीका अपराध दबाउँछन्, गरीबका अपराध उचाल्छन् : कार्ल मार्क्स
भदौ १६ गते, २०७६ - ११:०८
काठमाडाैं । कार्ल मार्क्स विश्वविख्यात चिन्तक तथा दार्शनिक हुन् । उनले समकालीन समाजलाई टाउकाले टेकेको समाजको संज्ञा दिए । समाजमा एउटा सशक्त ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ उनकै विचारबाट प्रेरित भएको मानिन्छ । कार्ल मार्क्स एक असल चिन्तक मात्र थिएनन्, एक सामाजिक चिन्तक र भावुक स्वाभावका व्यक्ति पनि थिए । संसारको भलाइमा उनका विचारहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको मानिन्छ ।
बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ – केही मानिसहरूले यो कुरालाई एउटा भनाइका रूपमा मात्र लिन सक्छन्। तर सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणापत्र लेखिरहेका बेला माक्र्सले बालश्रमको चर्चा गरेका थिए।
आफ्नो जिन्दगीको मालिक आफैँ हुनुपर्छ – के तपाई हप्ताको सात दिन काम गर्नुहुन्छ ? कामका बेला खाजा–खाना खाने समय लिनुहुन्छ ? एउटा निश्चित उमेरपछि तपाई सेवा निवृत्त हुन र निवृत्तिभरण पाउन चाहनुहुन्छ ? यदि तपाईको जवाफ सकारात्मक छ भने तपाई मार्क्सलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ।
‘मार्क्सले त्यतिबेला प्रकाशित हुने गरेका लेखहरूको अध्ययन गर्दथे। उनी यो निष्कर्षमा पुगेका थिए कि गरीबहरूले गर्ने अपराधलाई सञ्चार माध्यमले ठूलो स्थान दिन्छन्, जबकि नेताहरूले गर्ने अपराधको घटनालाई दबाउँछन्।’ (बिबिसी नेपाली सेवाबाट)
भदौ १६ गते, २०७६ - ११:०८ मा प्रकाशित